သဘာဝတရားက လွှမ်းခြုံသွားသော ကြောက်မက်ဖွယ် ဓာတ်ပုံ (၁၆) ပုံ - ONE DAILY MEDIA
ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု သို့မဟုတ် ကမ္ဘာကြီး ပျက်သုဉ်းသွားပုံအကြောင်းထက် ပိုမိုက်တဲ့ အရာတချို့ကို တင်ပြပေးမှာပါ ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုသဘာဝတရားရဲ့ လှပပြီး ထူးဆန်းတဲ့ ပုံရိပ်တချို့ကို မြင်တွေ့ရမှာမို့ပါ။ ဒါက အသေးအဖွဲဖြစ်ပြီး ငြီးငွေ့စရာလို့ထင်ရပေမယ့် အဲဒီနေရာအနှံ့မှာ အပင်တွေပေါက်နေတဲ့သိုးတစ်‌ကောင်ကို မမြင်ချင်ဘူးလား။
ဒီပုံတွေအကုန်လုံးရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုရှိနေနိုင်မလားဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မသိနိုင်ပါဘူး။ ဆိုလိုတာက သင်္ဘောတစ်စီး ဘာကြောင့် စွန့်ပစ်ခံခဲ့တာလဲ ? ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲ? ဘယ်သူကဂရုပြုမိလဲ ? အမိမြေ သဘာဝတရားကြီးက လူတို့ကို သွားများပေါ်လာသည်ထိ သဘောကျနှစ်ခြိုက်အောင်လဲဆန်းကြယ်မှုတွေ ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီပုံတွေကို ကြည့်ပြီးအေးချမ်းတဲ့ ခံစားချက်ကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
(၁) သစ်ပင်စဝါးမြိုမှုကို ရပ်တန့်ရန်ပ တောင်း‌ဆိုနေရရှာသော ဆိုင်းဘုတ်
(၂) သမုဒ္ဒရာ၏အလယ်ကို ဒီအပင်တွေ ဘယ်လိုရောက်လာပါသလဲ
(၃) အမှန်တကယ်ပင် သဘာဝနှင့်ရောနှော ဖန်တီးထားသော အရာ
(၅) သံချေးတက်တဲ့ ချားရဟတ်ကိုစီးဖူးလား?
(၇) Tomb Raider ကိုသတိရစေပါသလား?
(၈) တစ်နေ့မှာ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဟာလည်း ဒီလိုပဲ လေထုထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားကြမှာပါ
လူ့ယဉ်ကျေးမှုတွေ ပျောက်ကွယ်လာတယ်။ တစ်နေ့ လူတွေလဲ ပျောက်ကွယ်ရလိမ့်မယ် ။ မိခင်သဘာဝတရားကသာ နောက်ဆုံးမှာ ကြီးစိုးလိမ့်မယ်။ တစ်နေ့တွင် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို ကမ္ဘာမြေက ဝါးမျိုပါလိမ့်မယ် ။ နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေအကြောင်း သီအိုရီထုတ်မလဲ။ ဤအရာသည် ဝေးလံခေါင်သီသော စိတ်ကူးတစ်ခုဟု ထင်ရသော်လည်း ကမ္ဘာကြီး မည်သို့ဖြစ်နေသည်ကို ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ကြပါဘူး။
(၁၀) သီအိုရီအရ ဤလှပသော ဘုရားကျောင်းကို ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်သော်လည်း ယခုအခါ စွန့်ပစ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
(၁၁) သစ်ပင်၏ မျိုချခံလိုက်တဲ့ ရုပ်တုဟာ တည်ငြိမ်နေဆဲပါပဲ
(၁၂) ဘယ်လိုလူကများ ပီယာနို ကို တောထဲမှာထားခဲ့တာပါလဲ??
(၁၃) လွန်ခဲ့‌သောနှစ်ပေါင်းများစွာက ကလေးငယ်တစ်ဦး ကျန်ရစ်ခဲ့သော စက်ဘီတစ်စီး
(၁၄) ထူးထူးခြားခြား စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။
(၁၅) တစ်နေ့မှာ သစ်တောထဲ ဒီလိုလေး အသိုက်ဆောက်ပြီး နေချင်မိတယ်
(၁၆) ဒီလေယာဉ်ကို ဘာလို့ ဘယ်သူမှ လာမဆယ်ကြတာလဲ ?
ဒီပုံတွေကို ဘယ်လိုထင်လဲ။ သင့်တွင် သဘာဝတရား၏ဆန်းကြယ်ဥပမာများ ရှိပါသလား။ အောက်ဖော်ပြပါ မှတ်ချက်များတွင် ထိုပုံများကို မျှဝေခဲ့နိုင်ပါတယ်